Tottenham Vs Arsenal: Saadaal Laga Bixiyey Natiijada Ciyaartu Iyo Goolasha Dhalan Doona
HomeWararka MaantaTottenham Vs Arsenal: Saadaal Laga Bixiyey Natiijada Ciyaartu Iyo Goolasha Dhalan Doona
Khubaro ciyaaraha ka faalloota, isla markaana ku xeel dheer Premier League ayaa saadaal kala duwan ka bixiyey ciyaarta Sabtida ee Tottenham ay garoonkeeda ku martigelin doonto Arsenal.
Saadaashan oo khabiir waliba uu cudur daarkiisa iyo daliilkiisa raaciyey ayaa waxa kale oo ay ku lifaaqeen ciyaaryahanka ku guuleysan doona in uu goolka koowaad dhaliyo ciyaarta.
Tottenham 0-2 Arsenal: khabiirka Alex Livie ayaa saadaaliyey in Arsenal ay ku badin doonto 2-0, iyadoo uu goolka koowaadna u dhalin doono Olivier Giroud.
Tottenham 2-2 Arsenal: Falanqeeyaha ciyaaraha ee Karl Matchett ayaa isna bixiyey saadaal ka duwan tau u bixiyey Alex, waxaanu sheegay in ay ciyaartaasi ku dhamaan doonto barbar dhac 2-2, isla markaana uu goolka furitaanka ku damaashaadi doono Harry Kane.
Tottenham 1-2 Arsenal: Sam Tighe oo ka mid ah khubrada ku xeel dheer saadaasha, ayaa waxa uu isna xusay in Arsenal ay badin doonto isla markaana ay 2-1 candhada u gelin doonto Tottenham. Goolka koowaad waxa dhalin doona sida uu ku dooday Olivier Giroud.
Tottenham 2-1 Arsenal: Harry Kane ayaa Tottenham u dhalin doona goolka koowaad, waxaanay ciyaartu ku dhamaan doontaa 2-1 sida uu qabo Will Tidey.
Tottenham 1-2 Arsenal: Falanqeeye iyo saadaaliye Mike Cummings waxa uu aaminsan yahay in Arsenal ay damaashaadka guusha qaadan doonto, isla markaana ay ku garaaci doonto Tottenham 2-1, iyadoo uu goolka furitaanka ciyaartana saxeexi doono Santi Cazorla.
Tottenham 1-2 Arsenal: Waxa ciyaarta guusheeda qaadan doonta Arsenal, laakiin gool ayaa lagaga horreyn doonaa sida uu saadaaliyey Jerrad Peters.
Tottenham 2-1 Arsenal: Alex Dimond oo inta badan saadaashiisu rumowdo ayaa waxa uu isna qabaa in Arsenal guul darro kula noqon doonto gurigeeda iyadoo ay Tottenham ku garaaci doonto 2-1,waxana goolka koowaad shabaqa ku ruxi doona Christian Erisksen.
Mucjiso – Barcelona Oo Taariikhda Champions League Wax Ka Bedel Ku Samaysay